Faminaniana 2013 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
48 mianadahy no fitambaran’ireo nametraka taratasy filatsahan-kofidiana teny amin’ny CES ny Alahady 28 Aprily 2013 lasa teo. Tsy tao anatin’ireo anefa ny pasitera Mailhol na dia maro aza no efa niandry izay filatsahan-kofidiany izay. Nisy kosa anefa ny fanambarana lehibe nataony tetsy amin’ny Carlton Anosy ny folakandron’io Talata 30 Aprily 2013 io.
Ny antoko politika GFFM dia ahitana ireo karazan’olona maro samihafa avy amin’ny fiangonana sy finoana maro eto Madagasikara. Ny fivorian’ireo birao politika ao amin’ity antoko ity, izay tarihin’ny filoha nasionaly andriamatoa RAKOTOVAO Andriamparany, no nandraisana fanapahan-kevitra fa hanohana ny kandida Ny Rado RAFALIMANANA ny antoko amin’ny fifidianana filohampirenena ny 24 Jolay ho avy izao. Andriamatoa RAVELO Francis, filoha lefitry ny antoko no nanao izay fanambarana izay tamin’io folakandron’ny Talata io. Ny antoko GFFM dia misokatra amin’ireo kandida rehetra maniry hiara-hiasa aminy, ka mitovy fijery sy firehana aminy. Izay indrindra no nahatonga azy hisafidy ny kandida Ny Rado RAFALIMANANA. Hisy araka izany ny dinika hifanaovana amin’ity kandida ity, ka raha mahomby izay dinika izay dia hanohana azy ny antoko GFFM.
Marihina fa ireo birao politika ao amin’ny GFFM no nandray ny fanapahakevitra, ary ny pasitera Mailhol, izay filoha mpanorina ny antoko, dia manaiky izay tapak’ireo birao politika ireo. Tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny pasitera Mailhol rahateo no nanamafisany, fa ny GFFM no manohana kandida, fa ny Fiangonana Apokalypsy kosa dia miandry ny fahantaterahan’ny faminaniana, izay manambara fa hapetraka eo amin’ny fitondrana izy amin’ity taona 2013 ity. Notsindriany tsara fa ny fiangonana sy ny antoko politika GFFM dia samy hafa, ary tsy azo afangaro.